စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 27/03/2021)
Air travel is now recognized as the fastest-growing contributor to global warming. လွယ်ကူသောရှိပါတယ်သည့်အခါလေယာဉ်ရှောင်ရှား ခရီးသွားလာရန်အခြားနည်းလမ်း ဖြစ်နိုင်သည်မဆိုတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကာဗွန်ခြေရာကိုဖြတ်ဖို့လုပျနိုငျသောအကြီးမားဆုံးတစ်ခုတည်းအရာဖြစ်ပါသည်. လေထုညစ်ညမ်းမှုလေယာဉ်ကိုကျော်ရထားယူခြင်းအားဖြင့်သိသိသာသာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်. အများဆုံးဥရောပနိုင်ငံများရှိ, ရထားကွန်ရက်များ ကျယ်ပြန့်များမှာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမကြာခဏများမှာ, ဒါကြောင့်သင်နိုင်ပါတယ် ခရီးသွားလာ Eco-friendly ကိုမဆိုယဇျပူဇျောစရာမလိုဘဲ.
စိတ်ကူး ခရီးတာ စောစောနှစ်နာရီရောက်ရှိမည်ရှိခြင်းမဟုတ်, ရှည်လျားသောလုံခြုံရေးအညီစောင့်ဆိုင်း, အတိုင်းအတာ သင့်ရဲ့အရည်နဲ့ gels ထွက်, သို့မဟုတ်စစ်ဆေးရေးအဘို့သင့်ဖိနပ်ကိုချွတ်ယူ. မီးရထားခရီးသွားလာလောကီသားတို့သည်အမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်. သငျသညျလေကြောင်းခရီးဖြင့်သွားလာသည့်အခါ, ပိုပြီးအချိန်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများလိုအပ်နေပါသည်. ရထားလမ်းအားဖြင့်ခရီးသွားလာပုံမှန်အားဖြင့်သင်ကရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ် 30 မိနစ်ရှေ့ဆက်အချိန်နှင့်မည်သည့်လုပ်ရတဲ့နှင့်ရန်မလိုအပ်မရှိဘဲသင်၏ platform ကိုမှဖြောင့်လမ်းလျှောက် သင့်ရဲ့အဝတ်သေတ္တာထဲမှာစစ်ဆေး, so here we presented you with another great point of train travel versus plane travel, ရှိရာမီးရထားခရီးသွားလာကိုအနိုင်ပေး!
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, မီးရထားခရီးသွားလာရန် ပို. ပို. ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည် budget-conscious travelers. တစ်ဦးလေယာဉ်ယူပြီးသော်လည်း သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာ နေဆဲသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့တခုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ပုံမှန်အားအကောင့်သို့ယူလစျြလြူရှုကြောင်းအပိုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင့်ရဲ့ mode ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ, သငျသညျလေဆိပ်နှင့်ဆီကရတဲ့၏အပိုကုန်ကျစရိတ်ကိုအတွက် add ရပါမည်. ဤသည်ဖြစ်စေလောင်စာဆီများနှင့်ယာဉ်ရပ်နား၏ကုန်ကျစရိတ်ကပါဝင်ပတ်သက်, လေဆိပ်ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်တက္ကစီခသို့မဟုတ်. အရာတစုံတခုကိုမျှစျေးပေါဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစားများအတွက်ပေးဆောင်ကြမဟုတ်လျှင်, သင့်ရဲ့အာကာသများသောအားဖြင့်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံထိုင်ခုံပေါ်ကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်. ရထားတွင်, သင်ပိုမိုလွတ်လပ်စွာရွှေ့နိုင်ပါတယ်, သင့်ထိုင်ခုံန်းကျင်ကိုပိုပြီး legroom ရပါလိမ့်မယ်. သင်တို့ပြေးစဉ်အတွင်း, ထိုင်ခုံခါးပတ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ကို turn off ရန်အဘို့အသငျသညျစောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, ရထားပေါ်တွင်သင်တန်းမှာဆင်းရွှေ့, တစ်ကိုက်သို့မဟုတ်ကော်ဖီဖမ်းဆုပ်, ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်နေတာလား. တစ်ဦးက သာယာလှပရထားစီးနင်း တောင်အားလပ်ရက်နိုင်ပါတယ်. Most European trains also offer free WiFi – something which cannot be yet said for all လေကြောင်းလိုင်းများ.
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့သမျှသောဤအချက်များယူပြီး, မီးရထားခရီးသွားလာယနေ့ ပို. ပို. ကြီးစိုးလာပုံကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်. လေယာဉ်အဝေးနိုင်ငံများမိုင်မှသငျသညျအရအဆင်ပြေများမှာ. သို့သျောလညျး, if you are traveling around Europe or other areas with excellent rail transportation, ရထားခရီးသွားပို့ဆောင်ရေး၏ပိုပြီးထိရောက်နှင့်အဆင်ပြေ mode ကိုဖြစ်ပါတယ်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, နောက်ဆက်တွဲ Save A Train on Facebook, Instagram ကိုအကောင့်ကို, နှင့် တွစ်တာ Accounts.
airplanetravel planetravel ရထားခရီးသွား